Krema fivaviana ho an'ny holatra, fahasosorana, mangidihidy, postpartum ... | Bezzia
ny menaka fivaviana Natao hitsaboana aretin'ny holatra izy ireo. Izy ireo dia mety ho tena isan-karazany sy manokana ho an'ny olana tsirairay, fa ny ankamaroany dia manana fampiharana mitovy. Misaotra noho izy ireo miaraka amin'ny mpangataka iray, dia ho mora be ny mampiasa azy io ary koa misafidy ny habetsaky ny crème.
Rehefa mahatsapa izany fahatsapana fanindronana izany na fahasosorana eo amin'ny faritra fivaviana isika, ary koa teboka sasany amin'ny hoditra na tsiambaratelo tsy mahazatra, dia ny fiatrehantsika ny iray amin'ireo tranga matetika mahazatra ny aretina. Na dia mila manatona dokotera aza ianao dia marina fa ny ankabeazan'ireny krim ireny dia mihoatra ny latabatra. Jereo hoe ahoana no ampiasana azy ireo ary iza amin'ireo no azonao ampiasaina arak'ireo soritr'aretina.
1 Menaka fivaviana ho an'ny holatra
2 Krema ho an'ny vulvovaginitis
3 Borosy ho an'ny fahasosorana amin'ny fivaviana
4 Menaka aorinan-jaza
5 Fomba fanosorana menaka fivaviana
Menaka fivaviana ho an'ny holatra
Ny aretina masirasira dia mety fahita ao amin'ny vatantsika. Raha manana fiarovana ambany isika dia afaka miseho izy ireo nefa tsy tsapany akory. Noho izany dia mila miresaka momba ny candidiasis ary azo iaretana amin'ny fotoana rehetra amin'ny fiainantsika izany. Ka vetivety toy izao ary hanamaivanana ny zavatra rehetra aterak'io karazana aretina io, tsy misy toa ny crème Gine-Canestén. Izy io dia iray amin'ireo malaza indrindra ary manamaivana ny mangidihidy, ny mena ary ny fivoahana tsy ara-dalàna. Ity karazana crème ity dia misy a fampiasana fivaviana ary tsy ambony loha toy ny hafa. Ny fatra voalaza matetika dia 5 gr. mandritra ny 3 andro misesy eo ary tsara kokoa hatrany ny tsy mampiasa azy io raha mbola manana fe-potoana ianao.
Krema ho an'ny vulvovaginitis
Ilay antsoina hoe vulvovaginitis dia fivontosana na areti-mifindra, amin'ny fery na fivaviana. Amin'ny tranga sasany dia mety hitranga izy roa. Voalaza fa afaka miseho mandritra ny fahamaotiana ary indrindra, rehefa tsy misy fitandremana fidiovana eto amin'ity faritra ity. ny fahasosorana ny molotra ambany ho hita miharihary ary koa a fivoahana volontsôkôlà sy maintso misy fofona ratsy. Tsy sarotra akory ny fitsaboana azy. Averina indray, ny crème antibiotika dia mety ho ny vahaolana tsara indrindra. Hampiharina amin'ny vava. Na dia afaka manome fanafody antibiotika am-bava aza izy ireo. Iray amin'ny menaka ivelany matetika indrindra ho an'ny vulvovaginitis Io dia ny Clotrimazole Cream 2%. Fampiharana iray isan'andro mandritra ny 6 na 7 andro.
Borosy ho an'ny fahasosorana amin'ny fivaviana
Tsy isalasalana fa miresaka momba ny holatra indray isika ho antony lehibe mahatonga ny sasany fahasosorana ao amin'ny faritra akaiky anay. Raha mahatsikaritra an'io fahatsapana io ianao dia afaka misafidy menaka fanosotra toa an'i Fluconazole na Tioconazole ary Miconazole. Izy rehetra dia hanamaivana ny soritr'aretinao, satria raha naneho hevitra izahay, indraindray dia mety ho hafa isan-karazany izy ireo. Fa ireo anarana rehetra noresahinay ireo dia mety aminao.
Ie fantatro mandritra ny hormonina bevohoka toy ny fitomboan'ny estradiol, aorian'ny fiterahana dia hisy plummet iray amin'izy ireo. Ny vatana dia hiezaka ny hanitsy sy hiverina amin'ny ara-dalàna, fa tsy alohan'ny hanome lalana ny olana sasany. Saingy tsy misy izay tsy voavaha haingana araka izay tratra. Ny fihenan'ny hormonina tampoka dia hiteraka fahamainan'ny fivaviana. Na dia afaka manatona dokotera aza ianao raha lehibe kokoa ny tsy mahazo aina, miaraka amin'ny a menaka manitra alohan'ny firaisana ara-nofo dia hiova ny zava-drehetra. Mazava ho azy, miezaha tsy hanery ny vatanao. Mila vanim-potoana fanarenana izahay ary ho hitanao ny fomba hiverenan'ny zava-drehetra amin'ny ara-dalàna.
Fomba fanosorana menaka fivaviana
Araka ny efa nolazainay, ny ankamaroan'ny ny fivaviana fanosotra manana fampiharana tena tsotra. Ny sasany aseho ho an'ny faritra ivelany ary ny hafa kosa manana mpangataka. Zavatra iray izay ho mora kokoa noho isika tsy mila manao ny fisafidianana ny habetsahana ary mametraka azy amin'izany. Ny tsara indrindra dia ny manao azy amin'ny alina alohan'ny hatory. Rehefa mampiasa menaka fivaviana dia tsara kokoa ny tsy manao firaisana mandritra ny fotoana maharitra fitsaboana anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Menaka fivaviana
Miomana amin'ny fiverenana any amin'ny birao